सिक्वेलले सतायो - मनोरञ्जन - नेपाल
छक्का–पञ्जाले १६ करोड रुपियाँ ग्रस कलेक्सनको रेकर्ड के राखेको थियो, निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरीले सिक्वेल बनाउने घोषणा गरिहाले । भलै, उक्त फिल्मले सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुलेन । चर्को विवादमा मुछिए पनि छक्का–पञ्जा २ को ‘ए दाजु नसमाऊ...’ गीतले तहल्का पिटिसक्यो । त्यसमाथि अघिल्लो भागका सबै कलाकार दोहोरिएका छन् । तैपनि, दीपकराजलाई फिल्म कमजोर होला कि भन्ने चिन्ता छ । फेरि हामीकहाँ सिक्वेलको नजिर राम्रो पनि छैन । त्यही भएर त उनी सम्पादन भइरहँदा पनि फिल्म खिचिरहेका छन् । फिल्म थोरै मात्र खस्कँदा पनि दर्शकको अपेक्षा पूरा नहुने संशयमा रहेका दीपकराज भन्छन्, “सम्पादनमा कमजोर लाग्नासाथ सुटिङ गरिहाल्छु । फिल्म भनेको सिक्दै जाने रहेछ ।” फिल्मको प्रदर्शन ११ असोज तोकिएको छ ।
के होला केकीको ?
रेड: खुराकसहितको मनोरञ्जन
अब कुन फिल्म ?
फाल्गुन २९, २०७४
किनारामा पूर्वमिस नेपाल
'गाजाबाजा'मा ठीक्कको खुराक
फाल्गुन २३, २०७४
कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको साप्ताहिक प्रकाशन हो, नेपाल । पूर्ण रंगीन कलेवरमा प्रकाशित यो मुलुककै पहिलो साप्ताहिक म्यागेजिन हो । डेढ दशकदेखि यसले पाठकसमक्ष राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, खेलकुद, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रका खोजमूलक एवं विश्लेषणात्मक सामग्री पस्कँदै आएको छ । राष्ट्रिय राजनीति, नीतिनिर्माण र सामाजिक अभियानमा यसको योगदान अग्रपंक्तिमा छ । यसका प्रधान सम्पादक प्रशान्त अर्याल हुन् ।पुरा पढ्नुहोस् »